Kemgbe e guzobere ya, Tonglu na-agbaso usoro ọhụụ nke usoro onyinye ma nakweere usoro ọhụụ iji wee nwee mmepe ọhụụ. Tonglu na-agbaso echiche mmepe nke "mmụba njikwa arụmọrụ, ikike na-ewusi ọrụ ike, yana ọdịbendị na-enye ume ume nke ụlọ ọrụ ahụ", na-etolite atụmatụ iwebata talent, wee jiri nguzobe nke otu ndị ọkachamara dịka mmalite iji kwalite nhazi, nhazi, iche iche na ntorobịa nke oru na njikwa Oru oma na-agba ọsọ. N'ime usoro ọgụgụ, etinyere "ọrụ ngo + teknụzụ + teknụzụ + njikwa" pụrụ iche nke ahịa na usoro ọrụ na ịzụlite usoro mkpali ka ejiri nwayọ nwayọ wee rụọ ọrụ, na-enye ike zuru oke maka ike okike na mkpali nke ndị ọrụ niile, yana ndị nkwekọrịta isi maka ndị ahịa. ụlọ ọrụ Iwu, melite ntozu, na mmụba atọwo ntọala siri ike.
Ka ọ dị ugbu a, Tonglu nwere ihe karịrị ndị ọrụ 30, yana nnukwu ụlọ akwụkwọ gụrụ akwụkwọ na nkà na ụzụ na-eto ngwa ngwa; enwere otutu ndi okachamara nwere nkesa buru ibu, nkpuchi di iche, na akwa di iche. Onu ogugu nke ndi oru nwere asambodo bachelor ma obu karia bu 75.6%, otutu n’ime ha sitere na ulo akwukwo ndi ama ama ama di ka Hunan University, Hunan Normal University, na Yangzhou University, nwere ezi mmuta na oru ya.
Tonglu na-ewere ndị na-azụ ahịa dị ka isi, nwere ngwaahịa na ọrụ dị mma dị ka isi asọmpi, ọ bụkwa ọrụ anyị iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu nke ndị okenye. Site na njikarịcha na ọhụụ nke ụdị ahịa na njikwa, anyị na-aga n'ihu iwebata usoro ọhụrụ nke ngwaahịa. Meziwanye ụkpụrụ ọrụ, jiri ụdị azụmaahịa ọhụụ, jikọta uru nke isi obodo, njikwa, teknụzụ na mba na ụlọ ndị nwere ogo dị elu, ma nye nkọwa nke echiche ọhụụ na nkọwapụta njirimara nke ngwaahịa ndị okenye na-ekpori ndụ na ịchọkarị izu oke. Ọ nakweere usoro nhọrọ ngwaahịa siri ike, wee họrọ ngwaahịa ọ bụla dịka ụkpụrụ siri ike iji hụ na ogo ngwaahịa na uto dị elu ma kwekọọ na ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị kacha mma na ọrụ ahịa kachasị mma.
N'okpuru nduzi nke nnukwu atụmatụ nke otu eriri na otu ụzọ, Tonglu ga-agbaso usoro mmụta sayensị na nke kwụsiri ike, yana ndị ahịa dị ka isi, otu dịka mmalite, yana ụkpụrụ dị ka ntọala, iji mejuputa mmepe ahụ nke ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ, ìgwè na ụlọ ọrụ siri ike. Nkà ihe ọmụma, na-eme ka ihe ndị a rụzuru na ahịa na-aga n'ihu, na-elekwasị anya na mmụba ọhụrụ nke ngwaahịa ndị toro eto, na-elekwasị anya na mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mmepe gburugburu ebe obibi na mmepe mmepe, na-enyere ndị ahịa aka ịchọpụta uru, chọpụta uru na uru ekele, ma nweta mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ. erite uru ma merie mmeri. -Ewu Tonglu Development n'ime a mbụ na klas enterprise na ezi na-elekọta mmadụ aha na ahịa aha. "Naanị mmepe nwere ike ịlanarị;
naanị ihe ọhụrụ nwere ike itolite; naanị ịnwa anwa bụrụ onye mbụ iji kee ọdịnihu ", nke a bụ mkpebi Tonglu lekwasịrị anya na ọdịnihu ma chọọ mmepe. Gwakọta uru nke ọtụtụ ihe onwunwe, kwalite ịdị n'otu nke ụlọ ọrụ ahụ, were akara dị mma na njikwa njikwa dị ka nku, jikọọ mbọ ndị ọrụ niile na-emekọ ihe ọnụ, rụọ ọrụ ọnụ n'otu ụgbọ mmiri, ubu na ala, ma zụlite na sayensị. Anyị kwenyere na ọdịnihu Tonglu ga-aka mma!